Waa maxay tamarta kuleylka qorraxda iyo sidee u shaqeysaa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta kuleylka ee kuleylka ah
Marka aan ka hadlayno tamarta qorraxda, waxa ugu horreeya ee aan ka fikirno waa baararka qoraxda. Taasi waa tamarta qorraxda ee la adeegsado, laga yaabee inay tahay tan ugu caansan dhammaan tamarta dib loo cusboonaysiin karo, oo ay weheliso dabayl. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nooc kale: tamarta kuleylka qorraxda.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato wax ku saabsan noocan qorraxda qorraxda, laga soo bilaabo waxa ay tahay illaa waxa ay isticmaasho, iyadoo loo marayo astaamaheeda, sii wad akhriska 🙂
1 Waa maxay tamarta kuleylka qorraxda?
2 Qaybaha kuleylka kuleylka
2.2 Wareegga Haydarooliga
2.3 Kala beddelka kuleylka
2.4 Isu geyn
2.5 Bambooyin wareegga ah
2.6 Awood gargaar
3 Alaabada Looga Baahan Yahay Badbaadada
3.1 Maraakiibta balaadhinta
3.2 Farsamooyinka badbaadada
3.4 Kuleylka kuleylka
3.6 Kontaroolka otomatiga ah
Waa maxay tamarta kuleylka qorraxda?
Xaqiiqdii waxaad u maleyneysaa in biyaha wabiyada, harooyinka iyo baraagaha ay kujiraan shucaaca qoraxda, hase yeeshe, ma kululaadaan. Waana in laga faa'iideysto shucaaca qorraxda rakibis gaar ah ayaa lagama maarmaan u ah in laga caawiyo kuleylka dareerayaasha si hadhow loo istcimaalo.
Tamarta kuleylka kuleylka ah waxay si weyn uga qeyb qaadataa yareynta qarashka, iyadoo keydka tamarta ee soo socota iyo yareynta qiiqa CO2 ee sababa kuleylka adduunka iyo kicinta isbeddelka cimilada.
Mar alla markii aan ogaanno waxa ay tahay tamarta kuleylka qorraxda, waa in aan haysanno walxaha lagama maarmaanka u ah dhisidda rakibaadda qorraxda oo noo oggolaaneysa inaan ka faa'iideysano kheyraadkan tamarta.
Waxa ugu horreeya ee rakibaadda noocan ah ay tahay inay yeelato waa ururiyaha ama korontada ku shaqeeya cadceedda. Qalabkaan ku shaqeeya qoraxda uma shaqeeyo si la mid ah sida loo yaqaan 'photovoltaic' oo caan ah. Ma laha unug sawir qaade ah oo ururiya fotonnada iftiinka si ay ugu beddelaan tamar, laakiin taa beddelkeeda noo oggolow inaan qabanno shucaaca qorraxda si aan u bilowno kuleylka dareeraha dhex wareegaya. Waxaa jira noocyo kala duwan oo aruuriyayaal ah oo ku kala duwan waxqabadkooda.
Midda labaadna waa wareegga haydiga. Kuwani waa tuubooyin ka kooban wareegga halka aan ku daabuli doono dheecaanka kuleylka ee xanaaneyn doona tallaabada aan qaadi doonno. Wareeggu badanaa waa xiran yahay inta badan rakibidda. Sidaa darteed, waxaa jira hadal ah hal hab wareegyada, guddiga, iyo soo celi wareegyada, ilaa guddiga. Waxay u egtahay in wareegtani tahay nooc biyo kululeeyaha ka qayb qaata kululaynta meel.
Iyaga ayaa mas'uul ka ah gudbinta kuleylka wareegga. Kala wareejiyaha kuleylka ayaa tamarta qorraxdu qabato ku wareejinaya biyaha. Badiyaa waxay ka baxsan yihiin haanta (oo loo yaqaanno saxan-badelayaasha saxanka) ama gudaha (gariiradda).
Maaddaama baahida loo qabo tamarta qorraxda aysan had iyo jeer isku mid ahayn, sida ku jirta sawir-qaadista, waxay u baahan tahay nidaamka kaydinta tamarta qaarkood. Xaaladdan oo kale, tamarta kuleylka ee kuleylka ah ayaa lagu keydiyaa keydiyaasha. Qalabkani wuxuu maareeyaa inuu keydiyo biyaha kulul si loo helo marka aan u baahanahay. Waa taangiyo leh awood iyo daboolida lagama maarmaanka u ah si looga fogaado luminta tamarta iyo in biyaha ay kululaadaan markasta.
Bambooyin wareegga ah
Si dareeraha looga kala qaado hal meel loona geeyo meel kale, bambooyin ayaa loo baahan yahay kuwaas oo u adeega si looga adkaado dhibcaha cadaadiska ee wareegyada iyo xoogagga khilaafaadka iyo culeyska.
Marka shucaaca qoraxda uu yaraado, soosaarka tamartaan ayaa yaraata. Laakiin taasi maahan sababta ay dalabku sidoo kale u qabato. Iyada oo ay la soo gudboonaatay xaalad noocan oo kale ah oo dalabku ka badan yahay sahayda, waxaan u baahan doonnaa nidaam taakuleyn ah oo kululeeya biyaha waana taas gebi ahaanba ka madax bannaan nidaamka qorraxda. Tan waxaa loo yaqaan koronto-dhaliye.
Waa kuleelleeye bilaaba inuu ka shaqeeyo xaaladaha tamarta kuleylka ee kuleylka aan fiicneyn oo kululeysa biyaha keydsan.
Alaabada Looga Baahan Yahay Badbaadada
Waa muhiim in la helo nidaam amni si loo hubiyo in rakibidda ay ku shaqeyso xaaladaha ugu wanaagsan oo aysan ka sii darin waqtiga. Waxyaabaha sameeya nidaamka amniga waa:
Sida aan ogsoonahay, sida biyuhu u kordhiyaan heerkulkooda ayay iyana u kordhaan mugooda. Sidaa darteed, cunsur waa lama huraan kaasoo awood u leh inuu dhuuqo kororkaan mugga ah maadaama dheecaanka gudbinta kuleylku sii ballaaranayo. Maraakiibta balaadhinta ayaa loo isticmaalaa tan. Waxaa jira dhowr nooc oo muraayadaha indhaha ah: furan oo xiran. Kuwa ugu badan ee la isticmaalay waa kuwa xiran.
Qaliinka ayaa loo isticmaalaa xakamaynta cadaadiska. Marka qiimaha cadaadiska ee loo dejiyay geedi socodka cabirida la gaaro, waalka ayaa soo daaya dareeraha si looga hortago cadaadiska inuu gaaro xadka halista ah.
Glycol waa dheecaan ku habboon in lagu qaado kuleylka kuleylka kuleylka ee kuleylka. Waxa ugu badan ee lagula taliyaa waa inay ahaato dareere qaboojiyaha, maaddaama meelaha heerkulkeedu aad u hooseeyo, qaboojinta biyaha ee wareegyada ay burburin karto rakibidda oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, dareeraha waa inuu ahaado mid aan sun ahayn, ma ahan inuu karkariyo, ma aha mid qayaxan, wuxuu leeyahay awood kuleyl oo sarreeya, waa inaan la khasaarin oo uu ahaado mid dhaqaale. Haddii kale, tamartu faa'iido ma lahan.
Ujeeddada ugu habboon ee rakibidda noocan ah waa in la helo boqolkiiba 60% biyo ah iyo 40% glycol.
Maaddaama marar badan ay biyuhu si aad ah u kululaadaan, waxaa muhiim ah in la helo kuleyllo ka hortaga kuleylkaan halista ah. Waxaa jira kuleyl kuleyl ah, taageerayaal, iwm.
Dabinnada ayaa awood u leh inay soo saaraan hawada ku urursan gudaha wareegyada waana ay sababi karaan dhibaatooyin halis ah hawlgalka rakibida. Thanks to nadiifiyayaashan hawadan waa la soo saari karaa.
Kontaroolka otomatiga ah
Waa curiyaha ka dhigaya inay wax walba si sax ah u shaqeeyaan, maaddaama ay u maleyneyso xakameyn otomaatig ah oo cabbireysa heerkulka ku dhejisan, taangiyada, barnaamijyada, kicinta qalabka kuleylka korantada (haddii nidaamkani jiro), barnaamij-sameeye, xakameynta mashiinka, iwm.
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa wax badan oo ku saabsan tamarta kuleylka ee qoraxda iyo adeegsiyadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta kuleylka ee kuleylka ah » Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa tamarta kuleylka ee qorraxda
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato bioethanol